10/08/14 ~ MM Daily Star
စောနိုင် အားလုံး သိတယ် အပိုင်း ( ၁ ) (ကရင်လက်နက်ကိ...
လူကုန်ကူးခံရမှု အများစုမှာ လိင်ကျွန်ပြုရန် ဖြစ်
ဘုန်းကြီးကျောင်းများအား ဖောက်ခွဲမည့်သတင်းကြောင့်ေ...
အကြမ်းဖက် IS အဖွဲ့ မြို့တစ်မြို့ထပ်သိမ်းပြန်
အ၀တ်သွားရုပ်ရာမှ ဓာတ်လိုက် သေ
မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦးအတွက် ဂျပန်ရောက်မြန်မာများ ထို...
ထိုင်းတွင် လူသတ်မှုဖြင့် စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံထားရသည့်ြ...
ခိုတောင်ကျွန်း ကိစ္စ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ကြမလဲ
စောနိုင် အားလုံး သိတယ် အပိုင်း ( ၁ ) (ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ အတွင်ရေးများ)
17:00 သမိုင်းအမှန်တရားများကို ဖွင့်ချခြင်း, ဖော်ထုတ်မှုများ No comments
စောနိုင် စိတ်ပျက် ခဲ့ ပါပြီ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ တစ်နေ့ က ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာ တွင် KNU ဗဟို ကော်မတီ ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းရန် အတွက် ကရင် တစ် ယောက် မှ အကြံပြု ထားသည် ဆိုသည့် သတင်း တစ်ပုဒ် ကို တွေ့ခဲ့ ရသည်။ ဥက္ကဌ ရာထူး ကို ဒေးဗစ် သာကပေါ ၊အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူး ရာထူး ကို စီဖိုးရာစိန် နှင့် စစ်ဦးစီး ချုပ် ရာထူး အား ဘောကျော်ဟဲ တို့ကို တာဝန် ပေး သင့် ကြောင်း နှင့် လက်ရှိ ဗဟို ကော်မတီ တွင် အသက် ၆၅ နှစ်ကျော် သူများ အား ထုတ်ပယ် သင့်ကြောင်း ဖော်ပြ ထား သည်။ ဘယ်သူ က ခိုင်းလို့ ဘယ်သူ က ရေးသလဲ ဆိုတာ ကို ကျူပ်ကောင်း ကောင်းသိ သည်။ သတင်း ကို ကြည့်၍ အကြီး အကျယ် စိတ်ပျက် မိသည်။ ဒါကြောင့် ကျုပ် အနေ ဖြင့် ဆုံးဖြတ် ချက် တစ်ခု ချလိုက် ရသည်။ ဤ ဆုံးဖြတ် ချက် သည် KNU နှင့် ကရင် အမျိုးသား များ ကို သစ္စာ ဖောက် လို၍ မဟုတ် ဘဲ ကရင် တစ်မျိုးသား လုံး ၏ ကောင်းကျိုး ကိုသာ ရှေ့ရှု ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေ သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ် အနေဖြင့် KNU ၏ လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ် နေသော လျှို့ဝှက် အတွင်း သတင်း အားလုံး ကို ထုတ်ဖော် ရေးသား လိုက်ရ ပါတော့ သည်။
လက်ရှိ ကရင် ပြည်နယ် တွင် အစိုးရ အား တော်လှန် ခဲ့သော တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် ဟောင်း ဟူ၍ သုံးယောက် သာ ကျန် ရှိပေတော့ သည်။ ဖထီး မူတူး စေးဖော (လက်ရှိ KNU ဥက္ကဌ)၊ အဖိုး ဆာမိ (လက်ရှိ တပ်မဟာ ၆ တပ်မဟာ မှူး) နှင့် အဖိုး ထိန်မောင် ( KNU / KNLA - PC ဥက္ကဌ) တို့ ဖြစ်ကြ ပေသည်။ နှစ် ခြောက်ဆယ် ကျော် အစိုးရ အား တော်လှန် ခဲ့သည့် ထို ခေါင်းဆောင် ကြီး များ သည် ယနေ့ တွင်တော့ ငြိမ်းချမ်း ချင် ကြပြီ။ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း သာ ကရင် တော်လှန်ရေး ၏ စစ်မှန် သော အောင်မြင်မှု ဟု သူတို့ ပြောခဲ့ ကြ လေပြီ။
သို့သော် KNU နှင့် အခြား သော ကရင့် လက်နက် ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ တွင် မငြိမ်းချမ်း လို သူများ အာဏာ ရ ယူလို သူများ ကျန်ရှိ နေပေ သေးသည်။ ထို သူများ သည် ယခု အခါ တွင် ခွဲထွက် လိုသည့် အရိပ် အယောင် များ တွေ့နေ ရ ချေပြီ။ ၄င်း တို့လို လူများ ခွဲထွက် သွားသည် မှာ ကရင့် တပ်မတော် များ အတွက် ကောင်းသည်။ သို့သော် မသိ နားမလည် သည့် ရဲဘော် များ ကရင် အမျိုးသား များ ကိုပါ ဆွဲခေါ် သွားမည် ကို ကျုပ် စိုးရွံ့ မိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျုပ် အနေဖြင့် သူ တို့၏ အကြံ စည် များကို ထုတ်ဖော် ပြ ပါမည်။ စီဖိုးရာစိန် သည် ဤ ပရော့ဂျက် ၏ အက္ခရာ ဖြစ်သည်။ သူသည် ယခင် ဥက္ကဌ တာမလာပေါ ၏ သမီး ဖြစ်သည့် အတွက် သူ့ အဖေ ကဲ့သို့ပင် တော်လှန်ရေး စိတ်သာ ရှိပေ သည်။ သူ့ အနေ ဖြင့် ယခု အခါ တွင်KNU မှ ခွဲထွက် ၍ ဥက္ကဌ လုပ်ချင် သော်လည်း မိန်းမ ဖြစ်သည့် အတွက် အဆင် မပြေ နိုင်ချေ။ ထို့ကြောင့် သူ ကြိုးဆွဲ မည့် လူ တစ်ဦး ရွေးချယ် ခဲ့သည်။
ထိုသူ ကတော့ ဒေးဗစ် သာကပေါ ဖြစ်သည်။ အဖိုး သာကပေါ ကလည်း သူ၏ အိမ်ဖော် ကို လက်ထပ် ယူမိ ရာမှ မိဘ က အမွေ ဖြတ်ကာ အိမ်ပေါ်မှ မောင်းချ သဖြင့် KNU သို့ ရောက်လာ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စီဖိုးရာစိန် သည် သူ့ အတွက် စစ်ဦးစီးချုပ် တစ်ယောက် လိုအပ် သည့် အတွက် သူ၏ ၀ှက်ဖဲ ကို ထုတ်သုံး သည်။ ထိုသူ ကတော့ ယခု ဒု ဦးစီးချုပ် ယခင် တပ်မဟာ (၅) မှူး ဘောကျော်ဟဲ ပင် ဖြစ် ပေသည်။ ဘောကျော်ဟဲ သည် စည်းကမ်း ကြီး သော စစ်သား စစ်စစ် ဖြစ်ပေသည်။ ဗိုလ်မြ ၏ တူ တော်စပ်ပြီး အစ္စရေး မှ ပေးအပ် သည့် သော့ တံဆိပ် ရရှိ ထားသူ ဖြစ်သည်။ စီဖိုးရာစိန် ၏ လက်စွဲတော် နှစ်ယောက် ကျန်သေး သည်။ ထို သူတွေ ကတော့ စောလှငွေ နှင့် မန်းမန်း သာ ဖြစ်ပေ သည်။
လူလည် လှငွေ သည် အဖိုး မူတူး အား KNU မှ ထုတ်ပယ် ပစ်ရန် အကြံပေး ခဲ့သူ ဖြစ်ပေသည်။ စစ်တပ် နှင့် အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ရေးထိုး သည် ဟု အကြောင်း ပြကာ စီစဉ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် သာပေါင်း ညာစား ဆိုသည် မှာ အားလုံး သိပေ သည်။ အဖိုး အား အားလုံး က ဥက္ကဌ ပြန်လည် တင်မြှောက် ပြီးချိန် တွင် လှငွေ အား KNU မှ ထုတ်ပယ် ပစ်ခဲ့ရာ မှ လှငွေသည် တပ်မဟာ (၂) ဘက် သို့ ထွက်ပြေး ခဲ့ပြီး ယခု အခါ တွင် တပ်မဟာ (၅) တွင် ခိုဝင်လျက် ရှိသည်။ မန်းမန်း ကတော့ ဗဟို ဦးစီး တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ပြီး ယခင် ကတည်း က စီဖိုးရာစိန် အား ထောက်ခံ သည့် လူလည် ကရင် တစ်ယောက် သာ ဖြစ်ပေ သည်။
ဒေါက်တာ တင်မိုသီ ဆိုသူ ကျန်သေး သည်။ သူ ကတော့ ကရင် တစ်မျိုးသား လုံး အကျိုး စီးပွား အတွက် အန္တရာယ် အရှိ ဆုံး ဖြစ်သည်။ သြစတေးလျ နိုင်ငံ သား တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာ ဘွဲ့ ဆိုသည် ကလည်း ဘာသာရေး သင်း အုပ် ဆရာ ဘွဲ့သာ ဖြစ်ပေ သည်။ အင်မတန် ညဏ်ပြေး ပြီး လှည့်ကွက် များစွာ လုပ်နိုင် သူ တစ်ဦးလည်း သလို CIA လက်စွဲ တစ်ဦး လဲ ဖြစ်သည်။ တင်မိုသီ လှည့်ကွက် များ တွင် ပထမ ဆုံး အသုံးတော် ခံခဲ့ ရသည့် ဇတ်ကောင် ကတော့ စောတိုက်ဂါး ပင် ဖြစ်ပေ တော့ သည်။
တိုက်ဂါး သည် ဘာကောင်မျှ မဟုတ် သလို ဘာပညာ မျှလည်း မတတ်သည့် ထိုင်း နိုင်ငံသား တစ်ဦး ပင် ဖြစ်သည်။ စောတိုက်ဂါး အကြောင်း ကို ဖော်ပြ လျှင် သူ၏ ဆရာ တင်န်ဆင် အကြောင်း သည် မပါ မဖြစ်ပင် ဖြစ်ပေ သည်။ တင်န်ဆင် ဆိုသူ မှာ အလွန် လည်ဝယ်သော ကရင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ယောင်ယောင် ဘာ ယောင်ယောင် ဖြင့် စီးပွားရေး လုပ်စား နေသော ကိုယ်ကျိုးရှာ လူလည် တစ်ယောက် သာ ဖြစ်သည်။ ယခင် က ပင်လယ် တိုက်ပွဲ တစ်ခု တွင် စစ်တပ် ကြောင့် တင်န်ဆင် ၏ တပ်ရင်း တစ်ရင်းလုံး ပြုတ်ကာ နှစ်ဦး သာ အသက်ရှင် လျှက် ပြန်ပြေး ခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် တင်န်ဆင် ကျောပေါ် တွင် ငွေထုပ်ကြီး နှစ်ထုပ်အား ရအောင် သယ်လာခဲ့ သည် ကတော့ သူ ဘယ်လောက် လည်ကြောင်း ပြသ နေသည်။
တင်န်ဆင် အနေဖြင့် အလင်းဝင် ထားစဉ် ကာလ က DKBA နှင့် စစ်တပ် ဖြစ်ခဲ့သော တိုက်ပွဲ တွင် လက်နက်ကြီး ၀င်ပစ် ပေးခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ် ရှိသည်။ လက်နက် ကြီး ပစ်နေသော သူ၏ ပုံသည် ယိုးဒယား သတင်း တွင် ပါလာ သည့် အတွက် တင်န်ဆင် အစိုးရ ဘက်သို့ အသာ တကြည် ပြန်မ၀င် နိုင်ခဲ့ ပေ။ ထို့ကြောင့် မဲစောက် စတိုး ဆိုင်မှ သေနတ်များ အင်္ကျီ များ ၀ယ်ယူကာ လူအင်အား ရနိုင် သလောက် စုကာ အလင်း ၀င်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထို လူများ ထဲတွင် မယ်တော် ဆေးခန်းမှ ကား ဒရိုင်ဘာ တိုက်ဂါး ပါလာ ခဲ့ပေသည်။ တိုက်ဂါး မှာ သေနတ် ပင် မကိုင် ဘူး သော ကားသမား စစ်စစ် သာ ဖြစ်ပေ သည်။ ယခု လက်ရှိ အချိန် တိုက်ဂါး ဖြစ်ပွား ခဲ့သော ပြသနာ ပေါင်းစုံ မှာ တင်မိုသီ ၏ အကြံ ညဏ်များ ပင် ဖြစ်ပေသည်။ စစ် မတိုက် ဘူးသော ဘာ ပညာမျှ မတတ်သော တိုက်ဂါး လို လူမျိုးအား နိုင်ငံရေး ဇတ်ခုံ ပေါ်သို့ ဆွဲတင် နိုင်သည့် တင်မိုသီ ၏ အကြံ မှာ ပြောင်မြောက် လှပေ သည်။
နောက် တစ်ယောက် ကတော့ စော ဆန်းအောင် ပင် ဖြစ်ပေ သည်။ စောဆန်းအောင် ဆိုသူ မှာ ယခင် က နွားကျောင်းသား စစ်စစ် ဖြစ်ပြီး DKBA သို့ ရဲဘော် ဘ၀ ဖြင့် ၀င်ခဲ့သူ ဖြစ်ပေသည်။ လူမိုက် လူရမ်းကား တစ်ဦး သာ ဖြစ်ပြီး ဘာမှ မသိ သည့် လူမိုက် တစ်ဦး သာ ဖြစ်ပေ သည်။ ယခု မှ ဗိုလ်မှူးကြီး ယောင်ယောင် ဖြင့် လူတွင် ကျယ် နေခြင်း သာ ဖြစ်သည်။ နောက် တစ်ယောက် မှာ ကျော်သက် ဖြစ်သည်။ KNU တပ်မဟာ (၆) မှ ဒုရင်းမှူး ကို ပစ်သတ် ခါ DKBA ဘက် သို့ ထွက်ပြေး ခဲ့သူ ဖြစ်ပေသည်။ ယခု အခါ ဗိုလ်မှူးချုပ် ပင် ဖြစ်နေ ချေပြီ။ စောလားဘွယ် နေရာ အား စောမူရှေး နှင့် အပြိုင် လုခဲ့သူ တစ်ဦး လည်း ဖြစ်သည်။ စောမူရှေး ဦးစီးချုပ် ဖြစ်ပါက သူ အခြေ နေ မကောင်း သည်ကို ကောင်းကောင်း သိသည်။ ထို့ကြောင့် ယခု ကတည်းက တစ်စင် ထောင် က ခွဲထွက် နေလို သူလည်း ဖြစ်သည်။
စောတိုက်ဂါး အခု ကျော်သက် ထံ ရောက်နေ ချေပြီ။ သူတို့ အားလုံး ပူးပေါင်းကာ ဟက်ကြီး ရှိ ဘောကျော်ဟဲ တပည့် ဖားမီး ထံ ပြေးကြ လိမ့် မည်။ ဒါတွေ အားလုံး တင်မသီ အကြံပင် ဖြစ်သည်။ ဟက်ကြီး တွင် အင်အားစု များ ပူးပေါင်း ၍ တပ်မဟာ (၅) သို့ သွားရောက် ခိုလှုံ ကြမည်။ ထို့နောက် ဘောကျော်ဟဲ ကို စစ်ဦးစီး ချုပ် တင်ကာ ဥက္ကဌ ကို ဒေးဗစ် သာကပေါ အားပေး ၍ KNU အမည် ခံကာ UNFC သို့ ၀င်ရောက် ကြ ပေလိမ့် မည်။ ဥက္ကဌ မဟုတ် ပေမယ့် အတွင်း ရေးမှူး ရာထူး ဖြင့် နောက်ကွယ် မှ စီဖိုးရာစိန် က ကြိုးကိုင် မည်။ စီဖိုးရာစိန် ၏ အကြံ ပေး များ သည် တင်မသီ၊ လှငွေ နှင့် မန်းမန်း တို့ ဖြစ်ကြ မည်။
ဒါတွေ သည် ကြိုတင် စီမံ ထားသော အာဏာရူး လူ တစ်စု ၏ အကွက်များ ပင် ဖြစ်ပေ တော့ သည်။ ကျုပ် အနေဖြင့် ဒီ အာဏာ ရူးများ KNU မှ ခွဲထွက် သည်ကို ၀မ်း မနည်းပဲ ၀မ်းပါ သာသေး သည်။ အဖွဲ့ သန့် သွားသည် ဟု ဆိုနိုင် ပေသည်။သို့သော် ဘာမျှ မသိ နားမလည် သော ကရင် ရဲဘော် များ နှင့် ကရင် အမျိုးသား တွေကို ဆွဲခေါ် သွားမည် ကို ကျုပ် စိုးရိန် မိသည်။ ထို့ကြောင့် ဤ လျှို့ဝှက် သတင်း အားလုံး ကို ဖွင့်ချခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဒေါန မြေ ငြိမ်းချမ်း ပါစေ။
ထပ်မံ၍ MPC ၏ လျို့ဝှက်ချက် များနှင့် CIA ၏ ရည်ရွယ် ချက်များ အား ဖွင့်ချ ပါ အုံး မည်။ စောနိုင် အားလုံး သိ ပါသည်။
16:00 သတင်း No comments
ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်(DKBA) မှ ဗိုလ်မှုးကြီးစောဆန်းအောင်ကို တပ်မတော် တပ်သားများအား ပစ်ခတ်မှု၊လက်နက်ပြန်မအပ်မှုတို့ဖြင့် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားသည်ဟု အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချူပ်မှ သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိူက်မရောမြို့နယ်၊ ကလိုင်းကနိုင်ကျေးရွာတွင် စက်တင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့က တပ်မတော်သားအချို့နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ပါဝင်သော ကားအား DKBA တပ်က ပစ်ခတ်သဖြင့် နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားရာတွင် တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှသေနတ်များကို သိမ်းဆည်းသွားခဲ့သဖြင့် ကျိုက်မရောမြို့ မြို့မရဲစခန်းက DKBA မှ ဦးဆောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူ ဗိုလ်မှုးကြီးစောဆန်းအောင်အား စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချူပ်မှ ဗိုလ်မှုးဥာက်စိုးလွင်ထံမှ သိရသည်။
“သူတို့ကစတင်ပြီးတော့ ပစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဗိုလ်မှုးတစ်ဦးပေါင်မှာ ဒဏ်ရာရသွားတယ်။ တပ်မတော်သား ၁၂ ယောက်ကိုဖမ်းဆီးတယ်။ သေနတ်တွေကို သိမ်းဆည်းသွားတယ်။ လူတွေကိုတော့ အဲ့ဒီနေ့မှာပဲ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်။သေနတ်တွေကိုတော့ ခုထိပြန်မပေးသေးဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်ထားရတာဖြစ်တယ်”ဟု ဗိုလ်မှုးဥာဏ်စိုးလွင်က ပြောသည်။
ထို့အပြင်တပ်မတော်ထံမှ သိမ်းဆည်းထားသည့် သေနတ်များကိုပြန်ပေးရန် အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချူပ်အား ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်(DKBA) က အောက်တိုဘာလ(၅)ရက်နေ့တွင် ကတိပေးထားသည်ဟုလည်း DKBA ကော့ကရိတ်ဆက်ဆံရေးရုံး တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှုးစောသရဲနီက ပြောသည်။
“ဗိုလ်မှုးစောဆန်းအောင်တို့ အဖွဲ့ကို ကျွန်တော်တို့နဲ့မတွေ့သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေနတ်တွေကို ပြန်လာအပ်ဖို့တော့ ပြောထားပါတယ်”ဟု ဗိုလ်မှုးစောသရဲနီက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သွားခြင်းမှာ တပ်မတော်နှင့် DKBA တို့အကြား နားလည်လက်ခံထားသည့် ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်စေသည်ဟု ဗိုလ်မှုးဥာဏ်စိုးလွင်က မှတ်ချက်ပြုသည်။
“အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးထားတာဖြစ်လို့ အခုလိုလုပ်ဆောင်သွားတာကတော့ မကောင်းပါဘူး။ တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်စေတယ်”ဟု၎င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
လက်ရှိတွင်လည်း တိုက်ပွဲများရပ်ဆိုင်းကာ နှစ်ဖက်တပ်များအကြား ဖြစ်ပေါ်နေသော ပဋိပက္ခများဖြေရှင်းရန် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်ရုံး(ကြည်း) မှ ဒုတိယဗိုလ်ချူပ်ကြီးခင်ဇော်ဦးမှာ ကော့ကရိတ်မြို့သို့ အောက်တိုဘာလ ၂ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိနေကြောင်း အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချူပ်မှ သိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး DKBA မှ ဗျူဟာမှုး ဗိုလ်မှုးကြီးစောဆန်းအောင်ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ဖုန်းပိတ်ထားသည်။
DKBA အနေဖြင့် တပ်မတော်အပါအ၀င် ကရင်ပြည်နယ် နယ်ခြားစောင့်တပ် BGFတို့နှင့်လည်း စက်တင်ဘာလအတွင်း တိုက်ပွဲ ၄ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခြင်းများလည်းရှိခဲ့သည်ဟု ကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားစောင့်တပ်(BGF)မှ သိရသည်။
From: Shwe Myitmakha Media Group
15:00 ဆင်ခြင်စရာ No comments
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လူကုန်ကူးခံရမှုအများစုမှာ လိင်လုပ်ငန်း၌ လိင်ကျွန်အဖြစ် ပြုလုပ်စေခိုင်းခံနေရခြင်း ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ လူကုန်ကူးခံနေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ လူကုန်ကူးမှုစောင့်ကြည့်ရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးရုံး သံအမတ် မစ္စတာလူးဝစ်စီဒီဘာကာက ပြောကြားသည်။
‘‘ကျွန်တော်တို့အဓိက ဦးတည်ပြောလိုတာက မြန်မာမှာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လူကုန်ကူးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီး အများစုဟာ လိင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချခံရမှုအတွက် လိင်ကျွန်ပြုလုပ်ခြင်းခံနေရပါတယ်။ မြန်မာမှာ လူကုန်ကူးခံရသူ ခုနစ်ရာကျော်ထဲက ဒါဇင်ဝက်လောက်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တရုတ်ဘက်ကို ဒီကိစ္စနဲ့ ရောက်သွားရတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ တစ်ချို့လည်း ထိုင်းဘက်ကို ရောက်သွားကြတယ်’’ ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။ အောက်တိုဘာ ၆ ရက်က အမေရိကန်သံရုံးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၎င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း မီဒီယာများနှင့် စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သံအမတ် လူးဝစ်စီဒီဘာကာသည် အောက်တိုဘာ ၇ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပမည့် လူကုန်ကူးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အာဆီယံ−အမေရိကန် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ရန် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လူကုန်ကူးမှု စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် တိုက်ဖျက်ရေးရုံးသည် နှစ်စဉ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူကုန်ကူးခံရမှု ပြဿနာများကို အစီရင်ခံစာရေးသားလေ့ရှိပြီး ၂၀၁၃-၁၄ ပြည့်နှစ်အတွင်း မြန်မာနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာပါ အချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံတိုင်းတွင် ခေတ်သစ်လူကုန်ကူးမှုပြဿနာ များကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး မြန်မာအပါအ၀င် အာဆီယံဒေသတွင်း တိုင်းပြည်တိုင်း၌လည်း ယင်း ပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ ထို့ ပြင် လူကုန်ကူးမှုနှင့် ခေတ်သစ် ကျွန်ပြုမှုပြဿနာမှာ ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုများအတွက်ပါ စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်လာနေပြီး နိုင်ငံတိုင်းတွင် လူကုန်ကူးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို အချင်းချင်း သတိပေးမျှဝေရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက အကြံပြုသည်။
‘‘အာဖရိကမှာဆိုလည်း အလုပ်ရုံတွေမှာ၊ သတ္တုမိုင်းတွေမှာ၊ အိမ်ဖော်လုပ်ငန်းတွေမှာ လူကုန်ကူးခံနေရပါတယ်။ အမေရိကမှာဆိုလည်း လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် တချို့မှာ လူကုန်ကူးခံရသူတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတိုင်းဟာ လူကုန်ကူးမှုပြဿနာတွေကို သတိပေးဖို့ အချင်းချင်း လိုအပ်ပါတယ်’’ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးစစ်သားများအား ပြန်လွှတ်ပေးသည့်ကိစ္စကိုလည်း ဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းစေလိုကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
‘‘ကလေးစစ်သားမရှိဘူးဆိုတဲ့ အစိုးရရဲ့ ဒီကတိက၀တ်ကနေ လမ်းကြောင်းလွဲမသွားဖို့ မြန်မာ အစိုးရဟာ မြန်မာကလေးငယ်များကို ကူညီကာကွယ်ပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်’’ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာအစိုးရက ပြည်ပရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများ အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးဝန်ထမ်းများအား ဗဟုသုတတိုးပွားစေရန် သင်တန်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအပေါ် ကြိုဆိုကြောင်း ၎င်းကပြောကြားသည်။
‘‘အခု မြန်မာသံအမတ်တွေကို လူကုန်ကူးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ Training တွေလည်း ပေးနေပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ထိုင်းသံရုံးမှာဆိုရင် မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ အကူအညီလိုတဲ့အခါ သံရုံးကို သွားရမယ်လို့ တချို့အလုပ်သမားတွေ သိနေကြပါပြီ’’ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံအများစုတွင် လူကုန်ကူးခံရသူများမှာ ၎င်းတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကို ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြရန် ကြောက်ရွံ့နေခြင်းက လူကုန်ကူးတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်း၌ အဓိကစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
‘‘သူတို့ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ရဲကိုသေချာပြောပြဖို့က အဓိက စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတယ်။ လိင်ကျွန်ပြုတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်အကူစေခိုင်းခံရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူကုန်ကူးခံရသူအားလုံးမှာ တူညီတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေ ရှိမှာပဲ။ ဒါတွေက အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုတွေပဲ ဖြစ်တယ်’’ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် မြန်မာအစိုးရ လူကုန်ကူး တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် နည်းပညာအထောက်အပံ့များ ပေးအပ်ရန် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယင်းသ ဘောတူညီချက်အရ မြန်မာလူကုန်ကူးတိုက်ဖျက်ရေး ရဲအရာရှိများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ ကူညီခြင်း၊ လူကုန်ကူးခံရသူများအား ရဲအရာရှိများက နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးခြင်း အစီအစဉ်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ပံ့ပိုးပေးထားကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသည်။
‘‘လူတိုင်းက ပိုကောင်းတဲ့ အလုပ်ကို လိုချင်တယ်။ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ ဘ၀ကို သွားချင်တယ်။ ကိုယ့် မိသားစုဆီကို ကိုယ့်လုပ်အားခတွေပြန်ပို့ပေးချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ငွေကြေးရလိုမှုနောက်ကို အရမ်းကြီး Risk ယူပြီး လိုက်ရင်လည်း ဒါက လူကုန်ကူးခံရနိုင်ခြေရှိတာပေါ့’’ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်မည့် အာဆီယံ-အမေရိကန် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ လူကုန်ကူးခံရသူများအား အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေနှင့် ခေတ်သစ်ကျွန် ပြုမှုများကို တိုက်ဖျက်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်များ ပေါ်ထွက်ရေးကို သံအမတ်လူးဝစ်က မိတ်ဆက်တင်ပြမည် ဖြစ်သည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းများအား ဖောက်ခွဲမည့်သတင်းကြောင့် မောင်တော၌လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်
14:00 သတင်း, အကြမ်းဖက်မှုများ No comments
ခြိမ်းခြောက်မှုသတင်းကြောင့်မောင်တောဒေသ၌အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်မှစပြီးလုံ
ပိုင်း ကျီးကန်းပြင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် RSO သင်တန်းဆင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်သုံးဦးကို စက်တင်
ဘာ ၂၆ရက်က ဖမ်းဆီးရမိပြီးနောက် ကျေးရွာလုံခြုံရေးကင်းစခန်းများတွင်လုံခြုံရေးဦး
ရေတိုးမြှင့်ချထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း တောင်ပြို နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိတစ်ဦး
၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။
"ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သီတင်းကျွတ်ကာလအတွင်း စိတ်နှလုံးချ တရားဘာဝနာပွားများ
နိုင်အောင်နဲ့ ပွဲတော်တွေ ကျင်းပနိုင်အောင် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားတာပါ။စစ်တပ်လုံ
ခြုံရေးက ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာမှာ အရင်ငါးဦး၊ အခုတော့ ရှစ်ဦးထိတိုးချဲ့ချထားပါတယ်။
RSO ခြိမ်းခြောက်မှုသတင်းကြောင့် ဒေသခံအချို့ကမြို့ကိုတက်သွားနေကြသလိုတချို့
ကလည်း ပင်မလုံခြုံရေးစခန်းတွေရှိတဲ့ ကျေးရွာများမှာခိုလှုံရှောင်တိမ်းနေထိုင်မှုတွေရှိ
နေတယ်"ဟု မင်းကြီးကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမောင်သိန်းထွန်းက ပြောဆိုသည်။
မောင်တောဒေသတွင်း နေထိုင်သူအချို့မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံတွင် အယ်လ်ခိုင်ဒါ တာလီ
ဘန်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျောထောက်နောက်ခံပြု RSO အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွင်
"လုံခြုံရေးအတွက်တော့ မစိုးရိမ်တော့ပါဘူး။ စခန်းမှာ လုံခြုံရေးငါးဦး ထပ်တိုးချထားလာ
ရွာနေ ဦးထွန်းတင်မောင်က ပြောသည်။အယ်လ်ခိုင်ဒါခေါင်းဆောင် ဇာဝါဟီရီက အိန္ဒိယ
တိုက်ငယ်တွင် အယ်လ်ခိုင်ဒါအဖွဲ့သစ်ကိုထူထောင်ပြီး အိန္ဒိယအပါအ၀င် မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလား
အီရတ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်း အန်ဘာပြည်နယ်ရှိ မြို့တစ်ြမို့ကို
အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံ အကြမ်းဖက်အုပ်စု (အိုင်အက်စ်)
လက်နက်ကိုင်များက အောက်တိုဘာ၎ ရက်တွင် စီးနင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်း
စစ်မြေပြင်မှထွက်ပြေးလာသူ အီရတ်ပြည်သူများက ပြောကြားသည်။
အလားတူ အန်ဘာပြည်နယ်ရာမာဒီမြို့တော် အနောက်ဘက်
တစ်လွှားရှိ မြို့ငယ်များကို ခိုင်ခိုင်မာမာထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိ
သော အိုင်အက်စ် အကြမ်းဖက်အုပ်စုသည် ကူဘိုင်ဆာအမည်ရှိမြို့ကို ထိန်းချုပ်
လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အီရတ် စစ်ဘက်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အတည်ပြုခဲ့သည်။
အစ္စလာမ္မစ်နိုင်ငံ အကြမ်းဖက်အုပ်စုလက်ဝယ်သို့ ကူဘိုင်ဆာမြို့ကျခဲ့ရ
ပြီးနောက် အန်ဘာပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းရှိ ဟာဒီသာဆည်ကို ကာကွယ်ထား
နိုင်ရေးအတွက် အီရတ် တပ်ဖွဲ့များအသုံးပြုနေရသည့် အင်အယ်လ်အေဆက်ဒ်
အမည်ရှိ လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာအန္တရာယ်ဇုန်အတွင်း ကျရောက်သွားပြီ
ဖြစ်သည်။အင်အေဆက်ဒ်လေတပ် အခြေစိုက်စခန်းသည် အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံ အကြမ်း
ဖက်အုပ်စုလက်ဝယ် ကျရောက်နေသောဟစ်သ် အမည်ရှိမြို့နှင့် ကူဘိုင်ဆာမြို့ တို့
ကူဘိုင်ဆာမြို့ကို အိုင်အက်စ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုဝင်များ ၀င်ရောက်
စီးနင်းစဉ်အတွင်း အနည်းဆုံး အရပ်သားနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရပြီး ခြောက်ဦးဒဏ်ရာရရှိ
ခဲ့ကြောင်း သတင်းများ၌ ဖော်ပြထား
လက်ရှိအချိန်တွင် အိုင်အက်စ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုသည် မြောက်ပိုင်းမြို့
တော် မိုဆူးလ်အပါအ၀င် အီရတ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းဒေသ
လူမျိုးတိုင်းမှာ ယုံကြည်မှု ဆိုတာရှိကြ စမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ IGOROT လူမျိုးတွေဟာ ရှေးရိုး အစဉ်အလာ အတိုင်း သေဆုံးသူ တွေကို အခေါင်းမှာ ထည့်ပြီး မြင့်မားတဲ့ တောင်နံရံတွေ ပေါ်မှာ ချိတ်ဆွဲထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီအလေ့အထ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀) ကျော် လောက် ကတည်းက ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်နံရံတွေ ပေါ်မှာ အခေါင်းတွေ အများအပြား ချိတ်ဆွဲ ထားတဲ့ မြင်ကွင်းဟာ ထူးခြားလို့ နေပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလို ပြုလုပ်ရသလဲ ဆိုတာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူမျိုး အများစုဟာ သေဆုံးပြီးတဲ့ အခါတိုင်း ရုပ်အလောင်းတွေကို မြေကြီး ထဲမှာပဲ မြှပ်နှံလေ့ရှိ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံက IGOROT လူမျိုးတွေ ကတော့ ရုပ်အလောင်းတွေကို တောင်နံရံတွေပေါ်မှာ ချိတ်ဆွဲထားလို့ ရှိရင် နိဗ္ဗာန်ကို လျင်မြန်စွာ ရောက်ရှိစေမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရုပ်အလောင်းတွေကို ခေါင်းထဲမှာ ထည့်ပြီး တောင်နံရံတွေ ပေါ် မှာ ချိတ်ဆွဲထားရင် ရေကြီးမှု၊ သတ္တ၀ါတွေရဲ့ ဖျက်ဆီးမှုစတဲ့ အန္တရာယ်တွေ ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်နံရံ တွေပေါ်မှာ အခေါင်းတွေကို ချိတ်ဆွဲနိုင်ဖို့ သီးသန့် အခေါင်းတွေ ပြုလုပ်ရ ပါတယ်။ အခေါင်းရဲ့အရွယ်အစားက (၁) မီတာ လောက်ပဲရှိ ပါတယ်။ သေဆုံး သွားတဲ့ ရုပ်အလောင်းကို အခေါင်းထဲ မှာထည့် နိုင်ဖို့ အရိုးတွေကို ချိုးရလေ့ရှိပါတယ်။တောင် နံရံမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အချို့ အခေါင်းတွေဟာ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော်နီးပါး သက်တမ်းရှိနေပြီလို့ ဆိုထားပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၅ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင်
ဒုရဲမှူး ကြာညိုစခန်းမှူးတာဝန်ဆောင်ရွက်နေစဉ် နေပြည်တော်
ခုတင် ၁၀၀၀ ဆေးရုံကြီး၌ လူတစ်ဦးဓာတ်လိုက် သေဆုံးနေ
ကြောင်းဖုန်းဖြင့် အကြောင်းကြားသဖြင့် သက်သေများနှင့်အတူ
သွားရောက် စစ်ဆေးရာ ဓာတ်လိုက်သေဆုံးသူမှာ မောင်ဟိန်းကိုကို
(၂၁) နှစ် ဂျန်းရှင်းဟိုတယ်မှ စားပွဲထိုးလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ကြောင်း သိရ
ဖြစ်စဉ်မှာ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ် ဇ၀နသိဒ္ဓိရပ်ကွက် မြတ်လေး(၈)
လမ်း အမှတ် မ/၅၄၄၃ ရှိ ရွှေတောင်ကုမ္ပဏီ လူပျိုဆောင်တွင်
နေထိုင်သူ မောင်ဟိန်းကိုကိုသည် ည ၇ နာရီခွဲခန့်က အဆောင်
အနောက်ဘက်တွင် လှမ်းထားသည့် အ၀တ်အစားများအား
သွားရောက် ရုပ်သိမ်းစဉ်မီးတိုင်မှ နေအိမ်သို့ သွယ်တန်းထားသည့်
လျှပ်စစ် မီးကြိုးသည် နေအိမ်ခြံစည်းရိုး လိပ်ပြာတောင်သံဆူးကြိုးနှင့်
ထိကာ မိုးရေစိုနေသည့် အ၀တ်အစားများရုတ်ရာမှလျှပ်စစ်စီးဝင်
ပြီး ဓာတ်လိုက်ကာ သတိလစ်လဲကျနေစဉ် အဆောင်အတူနေ
သူငယ်ချင်း များကာ ခုတင် ၁၀၀၀ ဆေးရုံသို့ ဆေးကုသရန် ပို့ဆောင်
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မောင်ဟိန်းကိုကို သေဆုံးရခြင်းမှာ
ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခြင်း ဟုတ်၊ မဟုတ် စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဘုရားကုန်း
မြို့မရဲစခန်း မှ သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၁၂/၂၀၁၄ ဖြင့် ရေးဖွ့င်ပြီး
မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦးအတွက် ဂျပန်ရောက်မြန်မာများ ထိုင်းသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြမည်
ဗိတိန်စုံတွဲ အသတ်ခံခဲ့ရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထိန်းသိမ်းခံ ထားရသည့်မြန်မာများအား တရားမျှတသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ် ရန် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင် ငံသားများက အောက်တိုဘာ ၉ ရက်တွင် တိုကျိုမြို့ရှိ ထိုင်းသံရုံး ရှေ့၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
‘‘အဓိကကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ မှာရှိတဲ့ မြန်မာတွေလည်း ဒီအမှု ကို စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ ရယ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေလည်း ဒီအမှုကို သတိထားမိအောင် ကြိုး စားတဲ့ သဘောလည်းပါတယ်’’ ဟု ဆန္ဒပြပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ဂျပန် နိုင်ငံရောက် မြန်မာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်သူအောင်က ပြောသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ ကို အောက်တိုဘာ ၉ ရက် ဂျပန်စံ တော်ချိန်ညနေ ၃ နာရီ (မြန်မာစံ တော်ချိန်ညနေ ၅ နာရီခွဲ) တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သံသယတရားခံများအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာများ အရေးမျှတစွာ ကိုင်တွယ်ရန် ထိုင်းအစိုးရကို ဖိအားပေးတောင်း ဆိုမည့် အဆိုပါ ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပူး ပေါင်းပါဝင်ကြရန် ဂျပန်နိုင်ငံ ရောက် မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းသို့ အကြောင်းကြားထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
‘‘လောလောဆယ်တော့ ဘယ်နှယောက်ပါမယ်ပြောလို့ မရသေးဘူး။ စုနေကြတုန်းရှိ သေးတယ်’’ ဟု ဆန္ဒပြပွဲစီစဉ်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဗြိတိန်စုံတွဲများဖြစ်သည့် အသက်(၂၄)နှစ်ရှိ ဒေးဗစ်မီလာ နှင့် အသက်(၂၃) နှစ်အရွယ် ဟန် နာယီသာရစ်ခ်ျတို့ နှစ်ဦးသည် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် ညဉ့်သန်း ခေါင် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဆူ ရတ်ဌာနီခရိုင်၊ ခိုတောင်ကျွန်း (လိပ်ကျွန်း)တွင် အသတ်ခံရပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ၎င်းတို့၏ ရုပ်အလောင်းများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ သတ်ဖြတ်ခံထားရ မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သား သုံးဦးထက်မနည်းကို ထိုင်း ရဲများက ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ ထဲမှ အသက်(၂၃)နှစ် အရွယ် စောနှင့် အသက်(၂၁) နှစ်အရွယ် ၀င်းဟု နာမည်အတိုကောက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သူနှစ်ဦးသည် လူသတ်မှု၏ အဓိကလက်သည် တရားခံများဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းရဲ တပ်ဖွဲ့က စွပ်စွဲထားသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း လက်သည်တရားခံဟု စွပ်စွဲခံ ထားရသူများမှာ တရားခံအစစ် မဟုတ်နိုင်ကြောင်း မြန်မာ၊ ထိုင်း နှင့် နိုင်ငံတကာမှ ဝေဖန်သူများ က ခန့်မှန်းပြောဆိုနေပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုကို တိကျစွာ လုပ်ကိုင် ရန် ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့အား ဖိအားပေး လျက်ရှိသည်။
လူသတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး နာရီ ပိုင်းအတွင်း ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့သည် ကျွန်းပေါ်ရှိ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း လုပ်သား အများအပြားကို ထိန်း သိမ်းခဲ့ပြီး အချို့သည် စစ်ဆေးမှုများအတွင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများခံခဲ့ရကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ သည်။
ဖမ်းဆီးခံ မြန်မာများနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာမီရက်ပိုင်းအ တွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက် လည်ပတ်မည့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ပရာယွတ်ချန်အို ချာနှင့် မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန် တို့၏ဆွေးနွေးပွဲတွင် ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသတင်းဌာနမှ သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဇော်ဌေးကို ကိုး ကားပြီး ရေးသားခဲ့သည်။
ထိုင်းတွင် လူသတ်မှုဖြင့် စွပ်စွဲဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာ ၂ ဦး အဖြစ်မှန် ထုတ်မပြောဟုဆို(Update News)
ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်းတွင် ဗြိတိန်စုံတွဲကို သတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာနှစ်ဦးကို မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း ရှိမရှိ တိတိကျကျ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း မရှိကြောင်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် မြန်မာသံရုံးမှ ကောင်စစ်အရာရှိ ဦးထွန်းအေးက ပြောကြားသည်။
ဇော်လင်းနှင့် ဇော်လင်းထွန်း အမည်ရ အဆိုပါ မြန်မာနှစ်ဦးကို တစ်စုံတစ်ခု လွှမ်းမိုးထားသည့် သဘောတွေ့ရှိရပြီး ၎င်းတို့ကို ဆူရတ်ဌာနီခရိုင် Kohsamuai မြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်တွင် အောက်တိုဘာလ ၆ ရက်နေ့က မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့က မေးမြန်းရာတွင် ဇော်လင်းက တုံ့ဆိုင်းတွေဝေနေပြီး ဇော်လင်းထွန်းကမူ အေးအေးဆေးဆေး ပြန်လည်ဖြေကြားကြောင်း ဦးထွန်းအေးက ပြောဆိုသည်။
“ဇော်လင်းက ပုံမှန်အနေအထား မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရဲ့အနေအထားက တစ်ခုခုကများ လွှမ်းမိုးနေသလား စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကများ သူ့ကို ပြောထားတာရှိလို့ မေးခွန်းမေးတာကို ဖြေသင့် မဖြေသင့် စဉ်းစားနေတာလားလို့ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားမိတယ်” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
၎င်းတို့ နှစ်ဦး အပါအဝင် စုစုပေါင်း မြန်မာသုံးဦးသည် ဗြိတိန်စုံတွဲ အသတ်ခံရသည့် ညက အခင်းဖြစ်သည့်နေရာ အနီးတွင် ဂစ်တာတီးနေခဲ့ကြပြီး ဘီယာနှင့် ဝိုင် သောက်ထားသဖြင့် အမူးလွန်နေကြောင်း၊ ဗြိတိန်စုံတွဲ အသတ်ခံရသည့် ကိစ္စကို ၎င်းတို့ ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိ မမှတ်မိဟုသာ အဆိုပါ မြန်မာနှစ်ဦးက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း ဦးထွန်းအေးက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မြန်မာနှစ်ဦး ပြောဆိုချက်နှင့် ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောဆိုချက်များမှာ ကွဲလွဲနေကြောင်း မြန်မာကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားအဖွဲ့ (MAT) မှ ရှေ့နေ ဦးအောင်မျိုးသန့်က ပြောကြားသည်။
ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က အခင်းဖြစ်နေရာတွင် တွေ့ရသည့် စီးကရက်အတို မျိုးရိုးဗီဇ (DNA) နှင့် မြန်မာများ၏ DNA တူညီနေကြောင်း ပြောဆိုထားသော်လည်း အလုပ်သမားများက ယင်းနေရာတွင် ဆေးလိပ်မသောက်ခဲ့ဟု ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“မင်းတို့ ဆေးလိပ်သောက်လား မေးတော့ ဆေးလိပ်သောက်တယ်လို့ ပြန်ဖြေတယ်။ အခင်းဖြစ်တဲ့ နေရာမှာတော့ ဆေးလိပ်မသောက်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ သူတို့ ဆေးလိပ်သောက်တာက အခင်းဖြစ်တာနဲ့ ၂၅ ကိုက်လောက် ဝေးတဲ့ နေရာမှာပါ” ဟု ဦးအောင်မျိုးသန့်က ရှင်းပြသည်။
ဗြိတိန်စုံတွဲ အသတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်မြန်မာတစ်ဦး ဖြစ်သည့် မောင်မောင်ကို အခြားတစ်နေရာတွင် ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းထားပြီး ၎င်းကို တွေ့ခွင့်မပေးကြောင်း၊ မောင်မောင်သည် ယခုဖြစ်စဉ်တွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခြင်း မရှိသော်လည်း ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို သိနေသဖြင့် သက်သေအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု Kohsamuai မြို့ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူက ပြောဆိုကြောင်း ဦးထွန်းအေးက ပြောကြားသည်။
ထိုင်းဥပဒေအရ တရားရုံးတွင် သက်သေအဖြစ် တင်ရန် ထိန်းသိမ်းထားသူကို တွေ့ခွင့်မရဟုဆိုကာ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်
တွေ့ဆုံခွင့် ငြင်းပယ်ခံထားရသော်လည်း မောင်မောင်နှင့် တွေ့ခွင့်ရစေရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် ထိုင်းရှေ့နေသုံးဦး၊ မြန်မာရှေ့နေတစ်ဦး အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ကိုးဦး ပါဝင်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဆူရတ်ဌာနီခရိုင်ရှိ လိပ်ကျွန်း (Koh Tao) တွင် ဗြိတိန်စုံတွဲ အသတ်ခံရသည့် အလောင်းကို စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ခိုတောင်ကျွန်း ကိစ္စကို ...လက်တွေ့ ကျကျ ပြောရရင်တော့ …လုပ်နိူင်တဲ့ အချက် သုံးချက်ရှိတယ် …
ပထမအချက်က ....ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ အစွမ်းကုန်ပံ့ ပိုးပေးဖို့ ပဲ …အခု သံရုံးက ယိုးဒယားရှေ့ နေ သုံးယောက် …မြန်မာရှေ့ နေတစ်ယောက်ပါတဲ့ အဖွဲ့ ကို ....စေလွှတ်ထားပြီပြောတယ် ….
ယိုးဒယား ရဲ က အမှုတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံမှာ ….ယိုကွက် ၊ ဟာကွက်တွေ ရှိနေတာ အများကြီးပဲ …
ဒါတွေကို အခုကတည်းက စနစ်တကျ စုဆောင်းပြီး …တရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်ဖို့Line of Defence ကို ….
ကျကျနန ပြင်ဆင်ထားသင့်တယ် …ဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့ငွေအား၊လူအား ....အားလုံး အစွမ်းကုန် အသုံးချရမယ် …
တစ်ခါ ....ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်အပေါ် …အစိုးရအနေနဲ့အလေးထားကြောင်း ပြသရမယ် …သံအမတ်ကြီး ကလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ သင့်တယ် ….
ဥပဒေအတိုင်း အမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင်…အစိုးရက အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာ ….
သူတို့ နားလည်အောင် ရှင်းပြရမယ် …ဘာကိုမှ မကြောက်ဖို့အားပေးရမယ် …
နိူင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး နဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီး …ယိုးဒယားကို လိုက်သွားသင့်တယ် ….ဟိုဘက်က သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ ပြီး …ဒီကိစ္စအပေါ် မြန်မာအစိုးရက အလေးထားကြောင်း …
စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိကြောင်း …သေသေချာချာ ရှင်းပြရမယ် …..ဒါ အစိုးရ က လုပ်ပေးရမယ့် ကိစ္စတွေ …
ဒုတိယ အချက်ကတော့ ….ပြည်သူတွေက ဖိအားပေးတာပဲ …ယိုဒးယားသံရုံးတွေကို ၀ိုင်းဆန္ဒပြလို့ ရတယ် …Campaign တွေ လုပ်လို့ရတယ် ….မြန်မာပြည်မှာရော ….ကျန်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေက သံရုံးတွေရော …
အရင် ထစ်ကနဲရှိ ….မြန်မာသံရုံးရှေ့ အားတိုင်းဆန္ဒပြနေတဲ့….တစ်လကို ဆန္ဒပြပွဲ နှစ်ကြိမ်လောက် စီစဉ်နေတဲ့…ပြည်ပက ဘာမှန်းမသိတဲ့ ကောင်တစ်ချို့ လဲ …စိတ်ပါရင် ၀င်ပြလို့ ရတယ် …
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် …အခုအချိန်မှာ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေရင် …နောက်တစ်ချိန် သံရုံးရှေ့ကြိုက်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲလုပ် …အာ့ခါကျရင်တော့ နှစ်ပြားမတန်အောင် ဆဲခံရမယ် ….
တတိယအချက် ….ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ သူတွေက ၀င်ကူညီတာ …ညှိနိူင်းပေးတာ ၊ ဖိအားဝင်ပေးတာ …..
ကိုယ် နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးတဲ့…ကမ္ဘာ့ နိူင်ငံအသီးသီးက ထင်ရှားတဲ့ သူတွေကို စာရေးပြီး …ဒီကိစ္စကို အမှန်အတိုင်း ဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်အောင် …၀ိုင်းဖိအားပေးပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံတာ ….ဒါမျိုးတွေ လုပ်လို့ ရတယ် …..
၂၀၀၉ သြဂုတ်လ မြောက်ကိုရီးယားမှာ ….အမေရိကန်နှစ်ယောက် အဖမ်းခံရတုန်းက …အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ...ဘီလ်ကလင်တန် ကိုယ်တိုင် လိုက်သွားပြီး …ရအောင် ညှိနိူင်း ခေါ်ထုတ်လာခဲ့တာဟာ …တာဝန်ရှိလို့ မဟုတ်ဘူး …ငါ နိူင်ငံသားတွေအတွက် ….ငါတတ်နိူင်သလောက် ၀င်ကူမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ပဲ …..
ဒီထက် ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ …တာဝန်ဆိုတာ ယူတတ်ရင်ရှိတယ် …မယူတတ်ရင် မရှိဘူး ….ဒီလောက်ပဲ ….. ။ ။
( Photo - မြောက်ကိုရီးယားတွင် ဖမ်းဆီးခံရသော ...အမေရိကန်နိူင်ငံသူ နှစ်ဦးအား ...ဘီလ်ကလင်တန်မှ သွားရောက်ညှိနိူင်း ခေါ်ထုတ်လာစဉ် )
From: Ye Moe